Fitaovana amin'ny hotely Mount Washington: Orchestra, amboarampeo, telegrafy
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Fitaovana amin'ny hotely Mount Washington: Orchestra, amboarampeo, telegrafy
Jolay 22, 2017
Famakiana tany ho an'ny hotely Mount Washington vaovao any Bretton Woods, New Hampshire, dia tamin'ny taona 1900 ary nanomboka ny fananganana tamin'ny 1901. Izy io dia noforonin'i Joseph Stickney, mpamatsy vola any New York izay tompon'ny Mt. Trano mahafinaritra. Tamin'ny faran'ny taona 1890 dia nanapa-kevitra i Stickney fa hanangana hotely mihaja kokoa mifanandrify amin'ny Mt. Trano mahafinaritra. Dimy amby dimam-polo amby roan-jato Italiana no nampidirina ho amin'ny tena asa fanamboarana. Nipetraka tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tao amin'ilay trano izy ireo, namboarina ho amin'izany tanjona izany. Amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe telopolo natsangana tao amin'ny White Mountains teo anelanelan'ny 1850 sy 1930, ny Mount Washington Hotel ihany no nomanina sy namboarina ho orinasa tokana hatramin'ny voalohany. Charles Alling Gifford no nanamboatra azy, izay natolotr'i Henry M. Flagler.
Ny trano fandraisam-bahiny, natao hisokatra raha tsy amin'ny fahavaratra sy amin'ny fiandohan'ny fararano, dia nahitana ireo fitaovana farany. Nisy gara sy mpanazatra nitondra vahiny nankany amin'ny hotely avy tao amin'ilay gara, nanana kianja golf noforonin'i Donald Ross (izay mbola ampiasaina), misy farihy artifisialy, lalan-kely, lalan-kalety, telegrafy, rano mandeha , trano fidiovana, ascenseur, fitaovana fampangatsiahana maoderina, ny herin'aratra heriny (izay mbola tsy simba), zavamaniry hanaovana entona manazava raha tsy mandeha ny herinaratra, zavamaniry tokana hanontana ny menus isan'andro sy isan'andro gazety ho an'ny vahiny. Toeram-pivarotan-tsoavaly lehibe sy garazy ho an'ny fiara no nampiana miaraka amin'ny efitrano ho an'ny chauffeurs, efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny mpiasa (ny iray ho an'ny lehilahy ary ny iray ho an'ny vehivavy), ny orkesitra, ny amboarampeo, ny dobo filomanosana anaty rano mafana ary ny trano bilyarda. Dokotera iray sy mpitsabo mpanampy roa no niambina tao amin'ilay trano.
Mampalahelo fa maty i Joseph Stickney herintaona taty aoriana tamin'ny Desambra 1903. Navelany ho an'ny vadiny, Carolyn Foster Stickney, ny hotely roa sy ny fananana hafa. Nihazakazaka trano fandraisam-bahiny roa izy mandra-pahafatiny tamin'ny Novambra 1936. Carolyn dia namela ny hotely roa ho an'i F. Foster Reynolds, zana-drahalahiny, izay niasa tamin'izy ireo namakivaky ny Fahaketrahana sy hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa. Namidiny ny Mount Washington Hotel taty aoriana ary nanana harena be ireo tompona vaovao rehefa nangataka ny hampiasana ireo fotodrafitrasa ho an'ny Fihaonamben'ny Vola Bretton Woods ny governemanta amerikana. Ity fihaonambe iraisam-pirenena ity dia notohanan'ny Firenena Mikambana ary solontena 733 avy amin'ny firenena 44 nanatrika. Ny tanjony dia ny hiatrika ny olana ara-bola sy ara-bola iraisam-pirenena amin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa. Ny fanamboarana be dia be nataon'ny governemanta amerikana ho an'ny trano fandraisam-bahiny.
Tamin'ny 1955, ny trano fandraisam-bahiny dia namidy tamin'i Andriamatoa sy Ramatoa Morris J. Fleisher avy any Filadelfia, izay nitantana ny Hotely nandritra ny dimy ambin'ny folo vanim-potoana hatramin'ny fivarotana hatramin'ny 1969 tamin'ny Mount Washington Development Company. Ity orinasa ity dia namolavola ny faritra Ski Bretton Woods Ski malaza ary nahazo tamban-tsakafo marobe, ka nanamafy ny fananana Stickney Estate tany am-boalohany. Bretton Woods Corporation dia nahazo ilay tany tamin'ny 1975. Tamin'ny fananany, ny The Mount Washington Hotel dia voatanisa ao amin'ny National Register of Histories Places ary ala 6,400 hektara tsara tarehy namidy tamin'ny governemanta amerikana mba hampidirina ao amin'ny White Mountain National Forest.
Tamin'ny 1991, nisy toko vaovao iray teo amin'ny tantaran'ny hotely natombok'isan'ny vondronà mpandraharaha New Hampshire nitambatra mba hividy ny fananana manodidina mba hahazoana antoka ny toerany tamin'ny taonjato faha-21. Ny fividianana manaraka ny taranja golf roa an'ny Resort, ny tany fampandrosoana ary ny faritra ski lehibe indrindra any New Hampshire ao Bretton Woods, dia nahavory soa aman-tsara ny fananana Resort rehetra.
Tamin'ny Thanksgiving, taona 1999 no nisokatra ny hotely tamin'ny vanim-potoanan'ny Ririnina. Tamin'ny volana Janoary 2009, ny Mount Washington Resort dia nanokatra spaoro toradroa 25,000 toradroa sy ivontoerana fihaonambe 25,000 60 toradroa. Androany, ity toeram-pialantsasatra malaza ity dia nahavita fanavaozana $ 18 tapitrisa vaovao ary manolotra trano be dia be sy hetsika tsy tambo isaina ao anatin'izany ny spa fanompoana feno, ny faritra ski lehibe indrindra any New Hampshire, ny golf 1978-lavadavaka noforonin'i Donald Ross tany am-boalohany, dobo anaty sy ivelany, mitaingina kalesy sy fitsangantsanganana an-tsokosoko, mitaingina tennis sy soavaly. Ny Mount Washington Hotel dia mpikambana ao amin'ny Hotels Historic of America sy ny National Trust for Historic Preservation. Omni Hotels & Resorts no mitondra azy amin'ny anarana ofisialin'ny Omni Mount Washington Resort. Nampidirina tao amin'ny National Register of Histories Places tamin'ny 1986 ary notendren'ny National Historic Landmark tamin'ny taona XNUMX avy amin'ny United States Department of the Interior.
Ny mpanoratra, Stanley Turkel, dia manam-pahefana ekena sy consultant amin'ny indostrian'ny hotely. Izy dia miasa amin'ny hotely fandraisam-bahiny, fandraisam-bahiny ary fakan-kevitra momba ny fitantanana fananana, ny fanaraha-maso ny asa ary ny fahombiazan'ny fifanarahana momba ny trano fandraisam-bahiny sy ny fanendrena azy. Ny mpanjifa dia tompona hotely, mpampiasa vola ary andrana fampindram-bola. Ny bokiny dia misy: Hotely amerikanina lehibe: mpisava lalana ny indostrian'ny hotely (2009), namboarina haharitra: hotely 100 taona an-taonany any New York (2011), namboarina haharitra: trano fandraisam-bahiny 100+ taona atsinanan'i Mississippi (2013 ), Hotel Mavens: Lucius M. Boomer, George C. Boldt and Oscar of the Waldorf (2014), and Great American Hoteliers Volume 2: Pioneers of the Hotel Industry (2016), izay azo baikoina tamin'ny AuthorHouse rehetra tamin'ny alàlan'ny fitsidihana panafis.ir